Izisulu Zomdlavuza Vs. IMonsanto: IGlyphosate Showdown Iza eNkantolo Yomfelandawonye
Umbiko ovela kuGlyphosate Daubert Hearings
Posted on Mashi 15, 2018 by UStacy Malkan
Buyekeza i-3 / 19: IJaji uChhabria iyalele ukulalelwa okungeziwe kofakazi ababili babamangali. Landela UCarey Gillam ku-Twitter ukuthola izibuyekezo ezengeziwe mayelana nomthetho futhi siyaqhubeka nokuthumela imibhalo ku- Ikhasi leMonsanto Papers.
Imibhalo Yenkantolo evela eDaubert Hearings
NgoLwesihlanu Mashi 9 okulotshiwe
NgoLwesine Mashi 8 transcript
NgoLwesithathu Mashi 7 okulotshiwe
NgoLwesibili Mashi 6 okulotshiwe
NgoMsombuluko Mashi 5 okulotshiwe
Izimpikiswano zomlomo neminye imibhalo yasenkantolo ethunyelwe lapha
Ibhulogi Lesonto Lesayensi
Umqondisi Wocwaningo Lase-US Right to Know uCarey Gillam ubike eNkantolo Yombuso yase-US eSan Francisco ngesikhathi sangoMashi 5-9, 2018 iDaubert Hearings, lapho iJaji uVince Chhabria ezwe ubufakazi besazi ngesayensi maqondana nokuphepha kwe-glyphosate noMbulali we-Roundup we-weed we-Roundup. Eminye imibiko yafakwa ngu-Co-Director we-USRTK uStacy Malkan.
Ukuthola izibuyekezo, imibhalo kanye nokuhlaziywa okuvela enkantolo, bona i- Ikhasi leMonsanto Papers. Imininingwane engaphezulu mayelana ne-glyphosate, bona eyethu ishidi lamaqiniso esayensi, KaCarey Gillam ukubika nge-glyphosate nencwadi kaGillam, “I-Whitewash: Indaba Yombulali Wokhula, Umdlavuza Nenkohlakalo Yesayensi”(I-Island Press, 2017)
Imibiko ngokulandelana kwayo.
Updated: 03/05/2018 10:09
Abalimi Vs. IMonsanto: IGlyphosate Showdown Ifika eNkantolo yase-US eSan Francisco:
"Isonto Lesayensi" enkantolo yenhlangano izothatha isinqumo uma ngabe amacala omdlavuza womlimi aya phambili
Ukukhishwa Kwezindaba Zase-US Zokwazi, March 5, 2018 - Ukulalelwa kwenkantolo yombuso eSan Francisco kuleli sonto kuzogqamisa isayensi ezungeze isibulala-zinambuzane esisetshenziswa kakhulu emhlabeni, glyphosate, futhi sizonquma ukuthi abalimi nemindeni yabo bazokwazi yini ukuqhubeka nezinyathelo zomthetho kuMonsanto Co ngenxa yokukhathazeka ngomdlavuza.
Ngaphezu kwe Kusalindwe amacala angu-365 ngokumelene neMonsanto eNkantolo Yesifunda sase-US eSan Francisco, efakwe ngabantu abasola ukuthi ukutholakala kwe-Roundup herbicide kubangele bona noma abathandekayo babo ukuba bahlakulele i-non-Hodgkin lymphoma, nokuthi iMonsanto yahlanganisa izingozi.
Inkantolo ibize le micimbi kaMashi 5-9 ngokuthi “isonto lesayensi” ngoba ubufakazi obuzokwethulwa yibo kuphela obuzovela kochwepheshe besayensi yomdlavuza, kubandakanya izazi ze-epidemiologists, i-toxicologists, kanye nabahlaziyi bezibalo zezemvelo ababizelwe ukuhlaziya ucwaningo olufanele. Ososayensi bazokwethula ubufakazi babo obuhle kakhulu besayensi kuJaji wase-US uVince Chhabria, ozonquma ukuthi amacala aya phambili yini noma ayamiswa.
Intatheli kanye umbhali uCarey Gillam we-US Right to Know uzobe ebhuloga bukhoma umcimbi osenkantolo. Landela okuthunyelwe kwakhe lapha: https://usrtk.org/live-updates-monsanto-hearing/
"IMonsanto ithi izibulala-zinambuzane zayo ziphephile: Manje inkantolo ifuna ukubona ubufakazi," nguCarey Gillam, The Guardian.
Amaphepha eMonsanto: Imibhalo ebalulekile nokuhlaziywa okuvela emacaleni enkantolo yomdlavuza we-MDL.
Ukukhishwa kwabezindaba zeBaum Headland, "OFakazi Abangoti Bazobhekana Nokuzwa Umdlavuza we-Roundup"
03/05/2018 10:39 by UCarey Gillam
UMichael Baum waseBaum Hedlund, iseluleko sabalimi nemindeni yabo abamangalela iMonsanto mayelana nokukhathazeka komdlavuza uchaza ukuthi yini ebhekene nokulalelwa kwaleli sonto. https://www.facebook.com/USRightToKnow/videos/1662246967174627/
Kubuyekezwe: 03/06/2018 10:10 nguCarey Gillam
Umbukiso eSan Fran uyaqhubeka
Umbukiso uyaqhubeka eSan Francisco.
Amaqembu abameli abambethe okumnyama agcwalise inkantolo yeJaji Lesifunda sase-US uVince Chhabria ngoMsombuluko ekuseni ukulwela isayensi ezungeze ukukhathazeka ngomdlavuza kanye ne-Roundup herbicide kaMonsanto.
Njengoba kunamacala angaphezu kwama-365 ahlanganisiwe enkantolo yezifundazwe eziningi ngaphansi kweJaji uChhabria, kwakukhona abameli abaningi abamangali kunezihlalo etafuleni labamangali, ngakho-ke bachithekela emigqeni ebekelwe umphakathi.
Ama-laptops namaphakethe wezomthetho aphuzi, afakwe emgqeni agcwele amatafula abeluleki abaphikisayo njengoba abaningi babethukuthele bethatha amanothi futhi begcina isikhathi, bazi kahle ukuthi uhlangothi ngalunye lunomkhawulo wamahora ayi-11 ukwethula icala labo lesayensi kwijaji ekulalelweni okusebenzayo kuze kube uLwesihlanu. Abamangali kumele bakhombise ukuthi banobufakazi besayensi obubasekela ithi i-glyphosate, isithako esisebenzayo ku-Roundup, ibangela i-non-Hodgkin lymphoma (NHL).
Ukulalelwa kwamacala kuyisikhashana, kepha kubaluleke kakhulu enkantolo njengoba lokhu kulalelwa kuvumela uChabria ukuthi anqume ukuthi ngabe ososayensi abangabamangali baklelile ukufakaza mayelana ne-causation bazovunyelwa yini ukufakaza ecaleni. Ukugxila kulezo zinqumo ukuthi ngabe ochwepheshe basebenzise indlela eyaziwayo, nethembekile yokufika emibonweni yabo. Uma ijaji icala lingaqhubeka nokuqulwa kwecala, ijaji lizobe selinquma ukuthi ngabe ubufakazi obuningi ngaphezu kokuthi abukhombisi ukuthi i-Roundup idale iNHL yomuntu.
Owokuqala ukufakaza ngufakazi ongummangali wabamangali uBeate Ritz, onguSihlalo woMnyango Wezezifo e-UCLA, we-Occupational and Environmental Health (COEH).
Ngaphansi kokubuzwa kommeli wabamangali uKathryn Forgie, uRitz wahamba nejaji ochungechungeni lwezifundo ze-epidemiology ezenziwa eminyakeni edlule ezikhombisa izibalo ezibucayi ezibalulekile ezixhumanisa i-glyphosate nomdlavuza. Imibhalo ikhombisa ukuthi ubungozi kubantu ababhekwa "njengabasebenzisi abajwayelekile" be-glyphosate babubalulekile, wafakaza.
IJaji uChhabria ubuze uRitz ngemikhakha eminingana yocwaningo lwesayensi futhi wabonakala ekhathazekile ngokuthi ngabe izifundo zilungisiwe noma cha ukuze zivezwe kwamanye ama-pesticides.
Lapho ebuzwa ngocwaningo uMonsanto wakhomba njengobufakazi obubucayi bokuthi akukho okungaxhunyaniswa ne-non-Hodgkin lymphoma ne-glyphosate, uRitz wachaza ukuthi ucwaningo - iqembu elibizwa nge-Agricultural Health Study (AHS) - lalinokuza okuningana okufushane.
Phakathi kwezinkinga, wafakaza, imininingwane ye-AHS ku-glyphosate incike kakhulu ezinkumbulweni zabantu abagcwalisa imibuzo yezimbongolo. Incane futhi kunalokho obekufiswa futhi ayikalandeli abantu isikhathi esanele, esho. "Khumbula iphutha" "empeleni kuyisitha sokuhlolwa kokuchayeka," esho.
03/05/2018 13:25 by UCarey Gillam
Ummeli owayehleli eduze kwami ​​emgqeni wokuqala uchaza lokhu ngokuthi "ukuhleleka kwangemva kokudla."
Kepha sekuqala ukuheha - Ngemuva kwekhefu elifushane lesidlo sasemini, udokotela wezifo ezithathelwanayo uBeate Ritz uphinde waqala ubufakazi ngengxoxo eningiliziwe yokuhlaziywa kwe-meta. Uthi maqondana ne-glyphosate, kunemininingwane yezilwane kepha "okubaluleke kakhulu" imininingwane yomuntu ekhombisa ukuhlangana phakathi kwe-lymphoma ne-glyphosate. Uthe "amakhefu e-DNA akhonjisiwe ukuthi enzeka lapho abantu bevezwa." Uthi isiphetho sakhe ngukuthi i-glyphosate ne-glyphosate based herbicides "ziyayidala iNHL."
Kepha lapho iJaji uChhabria embuza ukuthi acacise kabanzi - uyakholelwa yini ukuthi umuthi wokubulala izinambuzane njengamanje ubangela i-NHL noma "uyakwazi" ukubangela i-NHL, wathi yiwo owokugcina. "Siyazi ukuthi ubuthi buyisilinganiso," esho. Lokho kudale ukuthi abanye bakuhlebele phakathi kwabameli babamangali baphinde babuze imibuzo uRitz athi kuzoncika emacaleni omuntu lowo.
Abameli beMonsanto manje badutshulwa eRitz.
03/05/2018 15:29 by UCarey Gillam
URitz Uphetha Ubufakazi NgamaHalala avela kuJaji
Whew - Ubufakazi bamahora amahlanu obunobufakazi bommangali, udokotela uBeate Ritz, waphetha ngokuhlekisa nxazonke njengoba iJaji leNkantolo yaseFederal uVince Chhabria etshela uRitz ukuthi "siyakuhalalisela" ngobufakazi bakhe obunomdlandla, yize kwesinye isikhathi bube yisimanga. glyphosate nokuxhuma nomdlavuza, ikakhulukazi i-non-Hodgkin lymphoma.
UChhabria kudingeke ukuthi aluleke uRitz kaningi ngesikhathi ephekwa ngemibuzo ngummeli weMonsanto u-Eric Lasker ukuthi ayeke ukubuza uLasker imibuzo futhi amtshele ukuthi imiphi imibuzo okufanele ayibuze. Ijaji lithembise - ngokuhlekisa - ukuthi kubekelwe eceleni isikhathi phakathi nesonto ukuze uRitz azenzele eyakhe imibuzo uLasker lapho bekuyinto engakhanyi kangako ekucwaningisisweni okungathi sína kwesayensi.
Ngaphambi kokuthi aphume kusihlalo wofakazi, uChhabria wambuza ukuthi uyakholelwa yini ukuthi amazinga akhona okuvezwa yi-glyphosate abangela noma abangele i-non-Hodgkin lymphoma. URitz uthe imininingwane emihle yokuvezwa kwe-quantification iyashoda kodwa ngenkathi ecindezelwa yijaji ukusho ukuthi ngabe lezi zifundo azibuyekezile zikhombisa noma cha ukuthi i-glyphosate idale iNHL kubantu waphendula wathi: "Yebo ngicabanga ukuthi bayakwenza lokho."
Okulandelayo: UDennis Weisenburger, udokotela nodokotela wezifo ogxile kakhulu ocwaningweni lwe-NHL, uyama. UnguSihlalo woMnyango Wezifo Zempilo weCity of Hope Medical Center, e-Omaha, eNebraska.
03/05/2018 17:02 by UCarey Gillam
"Kunengqondo yezinto eziphilayo"
Usuku olude lobufakazi olwethulwe ngofakazi babamangali luphothulwe ngezitatimende eziqinile ngochwepheshe we-NHL uDennis Weisenburger ebeka izifundo eziningi ezixhasa izinsolo zabamangali zokuthi i-Roundup herbicide kaMonsanto esekwe eglyphosate idala i-non-Hodgkin lymphoma.
Njengoba enza ngofakazi wangaphambilini uBeate Ritz, ijaji libuze uWeisenburger ukuthi ngabe akakholelwa nje ukuthi isibulala-zinambuzane siyakwazi ukudala i-NHL kepha uma sisebungozini abantu ababhekene nabo njengamanje. UWeisenburger uphendule ngokuvuma.
"Ubufakazi bufakazi obuqinile," kusho uWeisenburger. IGlyphosate nokwakheka okususelwa ku-glyphosate, kufaka phakathi i-Roundup kungadala i-non-Hodgkin lymphoma (NHL), utshele iJaji uChhabria.
UWeisenburger uchithe isikhathi ehamba enkantolo ngezifundo ezikhombisa ukulimala kwe-DNA kubantu abadalulwe i-glyphosate, kufaka phakathi ukufafaza emoyeni. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kokubili i-glyphosate nokwakhiwa kudala ukulimala kofuzo, uhlobo oluholela ku-NHL, kusho yena.
"Kunokukholelwa okuphathelene nemvelo."
Ufakaze ukuthi zombili izifundo zezilwane nezifundo zabantu ezivezwe ku-glyphosate zikhombise ukuxhumana phakathi kwamakhemikhali nomdlavuza.
Kokunye ukuhlola, iNorth American Pooled Project (NAPP) ubungozi be-NHL bukhuphuke cishe kabili lapho kubantu abasebenzisa i-glyphosate ngaphezu kwezinsuku ezimbili ngonyaka. Ezifundweni zezilwane, u-Weisenburger uthe kukhona "imiphumela ehlobene nomthamo yezicubu eziningi." Futhi, isifundo esisodwa segundane sikhombise izicubu ezingavamile ezilwaneni eziveziwe.
"Kunobufakazi obuningi obuphoqelela ukuthi i-glyphosate nokwakhiwa kwayo kune-genotoxic kumaseli aphilayo," wafakaza.
NjengoRitz, u-Weisenburger wayichitha imiphumela emisha esanda kushicilelwa njengengxenye ye-Agricultural Health Study engakhombisi ukuxhumana phakathi kwe-glyphosate ne-NHL.
Yize iMonsanto ifune ukuveza lolu cwaningo njengobufakazi obucacile bokuthi abukho ubudlelwano phakathi komdlavuza nombulali wawo wokhula, bobabili ososayensi abafakazile namuhla bathi ucwaningo lunamaphutha amaningi awenze wangathembela ekunqumeni i-glyphosate, kufaka phakathi ukuthi ubude bayo bufushane kakhulu, khumbula ukukhathazeka kwe-bias, kanye nokushoda kwemininingwane yangempela ekusetshenzisweni kwe-glyphosate eminyakeni edlule.
Abameli bakaMonsanto bazothola ithuba lokuwela behlola iWeisenburger ngoLwesibili.
Kubuyekezwe: 03/06/2018 10:58 nguStacy Malkan
Okulotshiwe ngoMashi 5, 2018
Nasi isixhumanisi esiya ku okulotshiweyo kobufakazi obuqhamuka kuMonusuku, Mashi 5 enkambisweni ye-Roundup Products Liability. Lo mbhalo nayo yonke imibhalo yasenkantolo neyokutholwa kwamacala athweswe amacala kuthunyelwe ku-US Right to Know Ikhasi leMonsanto Papers.
Kubuyekezwe: 03/06/2018 11:20 nguCarey Gillam
Isonto Lesayensi, Usuku Lwesibili
Ubufakazi base buzoqhubeka nosuku lwesibili "lweviki lesayensi" ngofakazi ongummangali uDennis Weisenburger ngenxa yokubuyela esitebhisini. U-Weisenburger, onguSihlalo woMnyango Wezemvelo weSikhungo Sezokwelapha saseDolobheni laseThemba e-Omaha, eNebraska, ugxile kakhulu ocwaningweni lwe-non-Hodgkin lymphoma (NHL).
UWeisenburger uchithe isikhathi esiningi sangoMsombuluko ntambama efingqa iJaji uVince Chhabria ngenkolelo yakhe yokuthi ukuhlaziywa kwezifundo eziningi zocwaningo kunikeza ubufakazi obuqinile bokuthi ababulali bokhula base-glyphosate nabase-glyphosate abanjengoMonsanto's Roundup bungadala ukuthi umuntu ngamunye aveze iNHL.
Abameli beMonsanto bazothola ithuba lokuhlwaya iWeisenburger ngoLwesibili ntambama ngemuva kokuphothula ubufakazi bakhe obuqondile.
Uhlangothi ngalunye luthi lunesayensi ngasohlangothini lwalo: “Umbuzo ophambi kwale Nkantolo umayelana nesayensi, ” Abameli baseMonsanto babhala enkantolo ngaphambi kokulalelwa kwecala. "Isayensi okukhulunywa ngayo inocwaningo kanye nedatha yangempela, hhayi ukuqagela nokuqagela. ” UMonsanto uthi ubufakazi babamangali bokuthi “Kugcwele izinto ezikhethwe ngokucophelela, ezingaphandle kokuqukethwe, ama-imeyili, imemoranda nokunye okungaphakathi Imibhalo yeMonsanto, ngokusho kwezinsolo zabamangali esithangamini sabo, ikhombisa ukubhalwa kwesipoki kwemibhalo yokubuyekeza (hhayi izifundo zokuqala uqobo) noma okusolwa ukuthi kungukuziphatha okungafanele kwezinkampani."
Ukuphikisana kwabamangali kuleyo mpikiswano yilokhu: “Indlela esetshenziswe ochwepheshe bakaMonsanto ayiphenduki kwisayensi ezwakalayo kepha kunalokho ukuthi ubufakazi obukhulunywa ngabo buyavumelana yini noma abuhambisani nesimo sikaMonsanto. Lapho ubufakazi buvuna khona, buthola ukuhlolwa okuncane futhi ochwepheshe bakaMonsanto bavame ukwehluleka ukuthola noma yimaphi amaphutha noma amaphutha. Kodwa-ke lapho ubufakazi bukhombisa ubudlelwano obuhle phakathi kokuchayeka ekwakhiweni kwe-glyphosate-based formulations (GBFs) kanye ne-Non-Hodgkin Lymphoma (NHL), ochwepheshe bakaMonsanto benza uphenyo oluhlala lubaholela ekutheni bangabunaki ubufakazi obuyibo bonke. Ukungahambisani noma ubufakazi obuphikisayo abuyinciphisi le ndlela. Kunalokho, lapho bebhekene nobufakazi obunokwethenjelwa bokuthi lokhu kuyimbangela, ochwepheshe bakaMonsanto basungula izindlela ezintsha zokunciphisa okutholakele, okubandakanya ukukhiqiza imibono noma amaqiniso amasha. ”
Uhlu lokuqala lwabakhangisi lufike kuzinto ezingama-252 ezibalwe, kuyilapho uMonsanto efakwe ohlwini lwezinto ezingaphezu kwe-1,000 sezizonke.
Elinye lamaphuzu amaningi okunamathela ekwethulweni kobufakazi kube ukuphikisana okunonya kukaMonsanto ekusetshenzisweni okungaba khona kwamakhasi alinganiselwa ku-1,500 emininingwane evela ocwaningweni olunempikiswano lwamagundane lwango-1983 ososayensi be-EPA ekuqaleni ababubona njengobufakazi bokuthi kungenzeka kube nomdlavuza we-glyphosate. IMonsanto ekugcineni yaphumelela ekukholiseni i-EPA ukuthi ukuhlaziywa kwayo kunamaphutha nokuthi empeleni isifundo asibonisanga sizathu sokukhathazeka.
Abamangali bafuna ukumba kuleyo mininingwane yokufunda, okuyinto uMonsanto ayiphikisile. "Amakhulu wamakhasi emininingwane engahlosiwe abamangali abafuna ukuyikhetha baqokiwe bayimfihlo engenakuphikwa," UMonsanto ubhale ngesifiso sabamangali sokuxoxa ngesifundo segundane ekulalelweni kwaleli sonto.
Udaba olulodwa ochwepheshe okufanele balubhekele iJaji uChhabria luhlobene nezifundo ezenza ukuxhumana phakathi kokuchayeka kwe-glyphosate ne-NHL kepha kungalungiswa ukuvezwa kweminye imishanguzo yokubulala izinambuzane. Ijaji lasho kaningi ukuthi libona lokho njengokukhathazeka futhi lifuna ukuqonda kangcono udaba njengoba ukulalelwa kuqhubeka. "Lokhu kuqhubeka nokuba yinkinga kimi," esho ngaphambi nje kokuba inkantolo iphethe ngoMsombuluko.
Ijaji liphinde laxwayisa abameli ukuthi lidinga ukuqonda kangcono udaba "lokukhumbula ukwenzelela" ocwaningweni lwezifo nokuthi lokho kungakuthinta kanjani okutholakele.
Ngemuva kobufakazi bukaWeisenburger, uhlelo lwabamangali lokwethula ubufakazi obuvela ku-Alfred Neugut bese kuba nguCharles “Bill” Jameson.
UNeugut ngudokotela osebenza nge-oncologist, uprofesa ocwaninga ngomdlavuza kanye noprofesa wezokwelapha nezifo ezithathelwanayo e-Columbia University.
UJameson ubambe iqhaza njengelungu leqembu elisebenzayo le-International Agency for Research on Cancer futhi uyilungu le-American Chemical Society kanye neSociety of Toxicology futhi ubamba iqhaza ekubuyekezweni kontanga kwamajenali ayisithupha esayensi.
Kubuyekezwe: 03/06/2018 15:56 by UCarey Gillam
Kubi futhi kuyadilika
Kwakuwumbuzo onzima wokubuza kwabachwepheshe uDennis Weisenburger, owayeboshwe ezindaweni eziningi zokuhlaziywa kwakhe ngummeli weMonsanto uKirby Griffis. Ngemuva kokuphuma endaweni yokuma kofakazi nokuhlala ngaphambili endaweni yokuhlala umphakathi, uzwakalise ukukhululeka ngokuqedwa, wathi, "Kufana nokuya esihogweni ubuye."
Ummeli kaMonsanto uvule isiphambano sakhe ngokukhombisa isilayidi esinombhalo ovela kudiphozithi okhombise uWeisenburger ephendula ngokuvumayo embuzweni obuza ukuthi ngabe indinganiso yakhe yokunikeza imibono ezindabeni ezishicilelwe ibinzima kakhulu ngokunikeza umbono wakhe ezindabeni zamacala. Usole i-Weisenburger ngokungakhiphi isithombe esigcwele semininingwane etholakalayo ephathelene ne-glyphosate, kanti uGriffis uphakamise ubufakazi obuvela e-Weisenburger obuqinisekisa ukuthi igagasi le-NHL lahlonzwa ngawo-1950, isikhathi eside ngaphambi kokuba i-glyphosate yethulwe emakethe nguMonsanto ngo-1974, igcizelela kunezinye izimbangela zomdlavuza.
Ngasekupheleni kwalobu bufakazi, nemibuzo evela kuJaji Chhabria yayishushu ukubamba. Ijaji lifuna ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuxhunywe i-glyphosate ne-non-Hodgkin lymphoma kubantu abatholakale ngasekupheleni kweminyaka yama-1970 nasekuqaleni kweminyaka yama-1980 abanikezwe i-glyphosate beza kuphela emakethe ngo-1974 futhi banikeza ubufakazi bochwepheshe bokuthi i-NHL ingathatha iminyaka engaphezu kwamashumi amabili ukuthuthuka kusuka ekuchayekeni kwe-pesticide. Ijaji liphakamise ukuthi kufanele "kucatshangwe" ukuthi okuthile ngaphandle kwe-glyphosate kubangele i-NHL kulabo bantu ababeyingxenye yezifundo zokuqala.
"Ngokusobala yilokho abezokuvikela abazama ukukusho," kuphendula u-Weisenburger, kodwa wavuma ukuthi kukhona ezinye izibulala-zinambuzane ezihlobene ne-non-Hodgkin lymphoma.
Okulandelayo esitendini- u-Alfred Neugut. i-oncologist yezokwelapha esebenza njengoprofesa wokucwaninga ngomdlavuza kanye noprofesa wezokwelapha nezifo zezifo e-Columbia University. Ebufakazini bakhe obuqondile bokuvula uthi kukhona ukucaciswa okuhle ngocwaningo olukhombisa ukuxhumana phakathi kwe-glyphosate ne-NHL.
Ososayensi ababuboni ubufakazi obuphindaphindwayo bezibopho phakathi kwe-glyphosate nezinye izinhlobo eziningana zomdlavuza, kepha imvamisa babona i-non-Hodgkin lymphoma. “Njalo uma ubheka kuvela ini? IGlyphosate neNHL, ”kusho yena.
UNeugut ufakaze ukuthi alukho ucwaningo lwesayensi oluphelele kepha ukungaguquguquki kokutholakele kocwaningo akunakushaywa indiva.
Ukhulume ngokukhulu ukushesha kangangoba ijaji nentatheli yasenkantolo kudingeke ukuba limxwayise ukuthi ehlise ijubane. “Ngivela eBrooklyn,” ephendula, ehlekisa enkantolo.
03/06/2018 16:05 by UCarey Gillam
Ufakazi oyingcweti u-Alfred Neugut, ethula ubufakazi kwabamangali ngoLwesibili, ubhekise ocwaningweni olwathiwa yiMonsanto bungubufakazi obubonakalayo obusekela izimangalo zayo ezithi i-glyphosate ne-Roundup azibangeli i-non-Hodgkin lymphoma (NHL). I-Agricultural Health Study (AHS) "isifundo esihle kakhulu sezinto eziningi," kusho uNeugut, kodwa ukuqonda noma yikuphi ukuhlangana - noma ukungabi khona - phakathi kwe-glyphosate ne-NHL, ucwaningo luyahluleka, wafakaza. Ukwanda okungajwayelekile ekusetshenzisweni kwe-glyphosate okwaqala ngasekupheleni kweminyaka yama-1990 kwashintsha kakhulu izinga lokuvezwa kwabalimi laba yi-glyphosate kusukela ekuqaleni kocwaningo lapho kutholakala ukuvezwa okuyisisekelo. Kunamanye amaphutha kulolu cwaningo, okubandakanya “ukulahlekelwa ukulandelwa,” kusho yena.
"Unephutha ngaphezulu kwephutha ngaphezulu kwephutha ... ucwaningo lwe-AHS alusizi ngalutho," kusho yena.
Ngesikhathi ebuzwa ukuthi ucwaningo olwenziwe kabi kangaka lungashicilelwa kanjani njengoba ucwaningo lwe-AHS belungoNovemba 2017, wahlikihla wathi "udoti uyenzeka."
Okulandelayo: Ummeli weMonsanto u-Eric Lasker ukuqala ukuhlolwa kwakhe.
03/07/2018 10:33 by UCarey Gillam
Usuku 3 - Amanothi nesipho & Shift to Toxicology
Usuku lwesithathu lokulalelwa komdlavuza weRoundup "isonto lesayensi" luvulwe ngesipho esivela kuJaji Chhabria kubamangali - isipho sesikhathi. Abamangali bazoba nemizuzu eyengeziwe engama-60 ukwethula ubufakazi babo bobufakazi obungeziwe obufakwe kumahora ayi-11 ohlangothini ngalunye abelwe imicimbi yaleli sonto. Ijaji lithe ngoba uvamisile ukuthatha isikhathi sabamangali ngemibuzo yofakazi, unqume ukuthi isikhathi esengeziwe besifanele. Abamangali babecele eminye imizuzu engama-90. IMonsanto ayifanele ngenxa yesikhathi esengeziwe, esho.
Ijaji liphinde laphawula ukuthi lithole umyalezo we-imeyili ovela “kwisakhamuzi” maqondana nalezi zinqubo, kodwa lathi likhethe ukungawufundi lo mlayezo. Wawadlulisela amakhophi alo kubammeli bobabili bommangali noMonsanto.
NgoLwesithathu ukulalelwa kwaqala ngokuqhubeka kwesiphambano sabamangali bakaMonsanto u-Alfred Neugut, isazi se-epidemiology oyisazi sezokwelapha i-oncologist kanye noprofesa wokucwaninga ngomdlavuza kanye noprofesa wezokwelapha nezifo e-Columbia University.
Ummeli weMonsanto u-Eric Lasker uphushe uNeugut esikhundleni sakhe kwezesayensi, futhi waphonsela inselelo kaninginingi inkumbulo yososayensi maqondana nezitatimende kanye nokuhlaziya kwangaphambilini okwaboniswa ngummeli njengokuphikisana nobufakazi bakhe kule micimbi. UNeugut ngesinye isikhathi wathi kumele ngabe wayenephutha phambilini kepha manje wayeqinisile.
Ngemuva kobufakazi bukaNeugut, ukugxila kokulalelwa namuhla kuzosuka ocwaningweni lwezifo kuya ocwaningweni lwezobuthi obuthiwa ngabamangali njengobufakazi obusekela izimangalo zabo zokubulala ukhula lukaMonsanto kubanga umdlavuza.
Isazi sokuqala se-toxicology esizothatha lesi sikhundla kuzoba nguCharles Jameson (ohamba noBill). UJameson usebenze njengomholi wohlelo lweNational Toxicology Programme eNIH's National Institute of Environmental Health Science iminyaka eyi-12. Ubeyilungu leqembu elisebenza e-International Agency for Research on Cancer elathola ukuthi i-glyphosate iyingozi yomdlavuza womuntu ngoMashi 2015.
Ngokuphenduka ubuthi bezobuthi kungenzeka kufike ithuba lokuxoxwa ngesifundo segundane sango-1983 esiqale sakhuthaza ososayensi be-EPA ukuthi bathi lolu cwaningo lukhombisa ubufakazi bokuthi kungenzeka ukuthi iglucphosate ibanga umdlavuza. Kwakungemuva nje kwengcindezi evela kuMonsanto kanye nombiko ovela kudokotela wezifo oqashwe uMonsanto - neminyaka yezingxoxo ne-EPA - lapho ukuhlolwa okusemthethweni kwalolo cwaningo kwashintshwa kungakhombisi zimpawu zokuba nomdlavuza.
IMonsanto ifuna ukugcina imininingwane eminingi evela kulolo cwaningo ngaphandle kwenkantolo ngemuva kokuthi abamangali bethi bazoyethula, kepha ijaji lithe imininingwane yocwaningo izovunyelwa njengobufakazi.
03/07/2018 10:49 by UCarey Gillam
Okulotshiwe kusuka ekuLaleleni kwangoLwesibili
Bona umbhalo lapha kusuka ezinkambisweni zangoLwesibili: https://usrtk.org/wp-content/uploads/2018/03/Monsanto-Daubert-hearing-transcript-180306VC.Vol_.2.pdf
03/07/2018 11:59 by UCarey Gillam
Ubufakazi Mayelana Nemininingwane Yokulimala Kwezilwane
Ubufakazi besazi sezobuthi uBill Jameson ngoLwesithathu buvuse ukuphikisana kwasekuqaleni kubameli baseMonsanto njengoba usosayensi wangaphambili kahulumeni echaza ngomzimba wocwaningo owamenza waphetha ngokuthi i-glyphosate kanye ne-glyphosate-based herbicides (efana ne-Roundup) ingadala i-non-Hodgkin lymphoma emhlabeni wangempela ukuvezwa - amazinga abasebenzi basemapulazini nabanye ababhekene nawo lapho besebenzisa umbulali wokhula. IJaji uVince Chhabria uchithe ukuphikisana kukaMonsanto.
UJameson wayeyilungu leqembu elisebenzayo le-International Agency for Research on Cancer (IARC) elalihlaziya ucwaningo nge-glyphosate futhi lamemezela ukuthi lingaba ngumdlavuza wabantu ngoMashi 2015.
IJaji uChhabria ubuze uJameson imibuzo eminingana ngalokho okutholwe yi-IARC, waphawula ukuthi ezifundweni zabantu iqembu le-IARC liphethe ngokuthi kunobufakazi "obunqunyelwe" bokubangwa komzimba, uma kuqhathaniswa nobufakazi "obanele" ocwaningweni lwezilwane.
Lokho kuholele uJameson ukuthi achaze ukuthi abanye ososayensi beqembu elisebenzayo le-IARC bacabanga ukuthi ubufakazi bunamandla kunokulinganiselwa kepha abanye abavumelani nalokhu. UJameson uncokole wathi: “Uma kukhona odokotela bokubulala izifo abathathu egumbini bese ubabuza imibono yabo uzothola imibono emine.”
Yena, njengososayensi abafakaze ngoMsombuluko nangoLwesibili, uthe kuyisisindo semininingwane ehlangene yezilwane neyomuntu ekhombisa ubuthi be-herbicide.
Kunezifundo eziningi zezilwane nge-glyphosate, ufakazele uJameson, ethi "kuyamangaza" ukuba nezifundo eziningi kangaka zezilwane zokuhlola ikhemikhali ngenxa yezindleko zalolo cwaningo. Iqiniso lokuthi abacwaningi banezifundo eziningi zezilwane njengoba benza i-glyphosate leza emandleni esiphetho sakhe sokuthi ikhemikhali lidala umdlavuza, kusho yena. Okubaluleke kakhulu, ucwaningo lwezilwane lukhombisa ukuthi kukhona ukuphindaphindeka kwezindawo eziningana zezimila, kufaka phakathi izicubu zesibindi kanye ne-lymphoma emibi, kusho yena.
"Sasinokuphindaphindeka okuningi kwama-lymphomas amabi egundaneni," esho. Izicubu ezifanayo zabonakala ezifundweni ezahlukahlukene kumalebhu ahlukene ngezikhathi ezahlukahlukene, okugcizelela amandla okuphetha kwe-carcinogenicity, kusho yena.
Ekubuzeni kwakhe uJameson, ummeli wabamangali u-Aimee Wagstaff ngesinye isikhathi wethule isilayidi esikhombisa ikhasi kusuka ekubekweni kwehora lesishiyagalombili likaJameson, ekhomba ukuthi uMonsanto wayenikeze ijaji ingxenye eyodwa kuphela yesitatimende sangempela sikaJameson maqondana nedatha. Isitatimende sonke sinikeze umongo odingekayo wenkantolo, esho.
Kubuyekezwe: 03/07/2018 14:38 nguCarey Gillam
Ngemuva kwekhefu lesidlo sasemini, iMonsanto iwela iJameson
Ngemuva kwekhefu elifushane lokudla kwasemini, ummeli waseMonsanto uJoe Hollingsworth usukumele phezulu eyohlola ufakazi ongummangali wabamangali uBill Jameson.
UHollingsworth wethule isiphambano sakhe ngokucindezela uJameson mayelana nomehluko phakathi kokuhlolwa kobungozi nokuhlolwa kwezinhlekelele, namazwana abhalwe nguJameson ediphozini.
Amajaji ayale uHollingsworth futhi aphakamisa ukuthi kunokuba aqhubeke abuze uJameson ngalokho akusho ekufakeni imali, ummeli kufanele ambuze ngalokho akucabangayo empeleni.
“Kungani ungabuzi umbono wakhe manje, ijaji litshele uHollingsworth. "Imvamisa le yindlela esikwenza ngayo," kusho ijaji.
UHollingsworth walungisa uphenyo lwakhe kodwa waphinda futhi wabuza uJameson mayelana nokuphawula akwenzile ediphozithi kwaholela uJameson ukuba aphendule ngokuthi lapho efakwa nguMonsanto “Ngikhishwe kabi futhi izinto zikhishwe emongweni izikhathi eziningi…”
Ngenkathi uHollingsworth eqhubeka nokucindezela uJameson ukuthi akhulume lapho uHollingsworth ethi uJameson ufake isicelo, ijaji liphinde liphazamise lapho likhuza uHollingsworth, lithi uma uHollingsworth efuna ukubuza uJameson imibuzo ngobufakazi bokufakwa ngaphambi kwesikhathi ngendlela ayibuzayo uHollingsworth kumele amnikeze yona okulotshiwe okuphelele kokufakwa kanye nenombolo yekhasi equkethe ukuphawula.
Ummeli weMonsanto uthi unakho ukuphawula okutholakala kwisilayidi ukukhombisa uJameson nenkantolo. Ijaji limtshela ukuthi lokho akwenele ngokwanele. Ufakazi kumele akwazi ukubona ukuphawula ngokuqukethwe, hhayi ukukhishwa kusilayidi, ijaji litshela uHollingsworth. UJameson uvunyelwe ukuthola futhi afunde ngokuzwakalayo ukuphawula kwakhe okugcwele.
Ngokuphindaphindiwe ijaji kubukeka sengathi liyasiphazamisa isitayela sokubuza uHollingsworth, okubandakanya ukusho ukuthi “yiphutha lakhe” ukukhuluma ngoJameson njengoba ufakazi ezama ukuphendula imibuzo.
Kubuyekezwe: 03/07/2018 15:47 by UCarey Gillam
Incane Yomdlalo Wezomthetho
Idrama encane yomthetho ebufakazini bakusihlwa ngufakazi ongummangali wabamangali uBill Jameson njengeJaji uVince Chhabria eluleka ephindelela ummeli ohola uMonsanto uJoe Hollingsworth ngamaqhinga akhe okuphenya uJameson.
UChhabria ubonakala ecasulwa kakhulu ngumzamo kaHollingsworth wokuvula umugqa wokubuza imibuzo ngokubuza uJameson mayelana nezitatimende azenze ethunjini. Ijaji litshele uHollingsworth kaningi phakathi nokubuza imibuzo ukuthi abuze uJameson ngqo ukuthi iyini imibono yakhe ngesayensi, bese kuthi uma lokho kuphikisana nokuthile akusho phambilini uHollingsworth angahlola lokho kuphikisana. Uphinde wagxeka uHollingsworth ngokukhuluma ngoJameson njengoba ezama ukuphendula imibuzo.
Ijaji likhombise ukukhathazeka okungenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi iMonsanto ithathe izitatimende zochwepheshe ngaphandle komongo. Lokho kukhathazeka kwagcizelelwa lapho, ngesinyathelo esibi kakhulu esashiya abameli babamangali bejabule, iJaji uChhabria wayala ummeli kaMonsanto ukuba afunde ngokuzwakalayo emakhasini amabili amarekhodi wobufakazi besimemezelo esasisekela ubuchwepheshe bokuhlaziywa kukaJameson ngaphambi kokuthi avumele iHollingsworth ukwethula isibonelo esehlukile kokudiphozwayo okususa ubungcweti bukaJameson.
UHollingsworth ubhikishe ngalesi senzo kodwa wagcina edlulile njengoba nejaji laphikelela. Ngemuva kwalokho waqeda ukubuza uJameson isiphambano.
Ngesikhathi ubufakazi bukaJameson buphela futhi ehla esikhundleni sofakazi, wabhekisa ejajini wathi: “Ngiyabonga ngokuhlonishwa, ukuhlonishwa kwakho,” kusho yena.
Ukulandela uJameson, uChris Portier, omunye ohlangothini lofakazi abangochwepheshe bommangali, uthathe lesi sikhundla. UPortier, owasuka ekhaya lakhe eSwitzerland ezokwethula ubufakazi, waveza ukwethuka okuncane ngaphambi kokuqala ubufakazi bakhe ehlolwa ngqo ngummeli waseNew York uRobin Greenwald.
UPortier wethule umbono wakhe wobuchwepheshe wokuthi amathuba okuthi i-glyphosate ibange i-non-Hodgkin lymphoma "aphezulu."
Ebufakazini bakhe, uPortier wenza ucwaningo lweGreim 2015, uMonsanto nabasekeli bakhe abathi bayasisekela isimo sabo sokuthi i-glyphosate ayibangeli umdlavuza. (Imibhalo yangaphakathi yeMonsanto ithi iphepha laseGreim lalibhalwe isipoki ngusosayensi waseMonsanto.) UPortier uthe lo msebenzi awubhalwanga kahle, unikeza imininingwane efingqiwe kuphela futhi unganikeli ngemininingwane yezilwane ngazinye, phakathi kokunye okuzayo
Kubuyekezwe: 03/07/2018 16:54 nguCarey Gillam
Inkantolo Ihlehlisela Usuku
OKUSHA - Kuthulwe uthuli ngemuva kokumiswa kwenkantolo: Abamangali 'babenikeze abameli beMonsanto ikhophi yedeskithophu ababeyisebenzisela ubufakazi obuqondile bukaPortier. Kepha ngenkathi inkantolo imisa phakathi nobufakazi, babefuna ukubuyiselwa emuva kwesilayidi - noma okungenani izingxenye ababengakazimbozi. Abameli beMonsanto abanohlelo lwabo lomdlalo ubusuku bonke babebhikisha kubameli babamangali. Kodwa ummeli weMonsanto u-Eric Lasker wasichitha isicelo esivela kummeli wabamangali u-Aimee Wagstaff sokuthi babuyise indawo yokulala yama-slide. Ummeli waseMonsanto wayesephumile nale mibhalo kanti uLasker wayengathandi ukuzama ukuyithola. UWagstaff okhungathekile ucele "usizo lwezomthetho" kwijaji kodwa wahlehla ngemuva kokuthi uLasker ethe babhale amanothi kufasitela lesilayidi futhi wenqaba ukubabuyisela.
Usuku olude lobufakazi olugoqwe ngufakazi ongummangali uChris Portier obekela inkantolo indlela eningiliziwe nobuchwepheshe obukhulu athi buxhasa imibono yakhe yokuthi i-glyphosate inokuxhumana okunamandla okuyimbangela ne-non-Hodgkin lymphoma.
UMonsanto ugxeke uPortier ngokuhlanganisa imiphumela ezifundweni zocwaningo eziningi ngezindlela ezihlose ukukhiqiza ngenhloso idatha evuna izimangalo zabamangali ezibhekiswe eMonsanto, kodwa uPortier ukuphikile lokho kukhetha ebufakazini bakhe ngoLwesithathu.
Usosayensi uchaze izinto ezinjengokuthi “ukubambezeleka” enkantolo, futhi waxoxa “ngokuhlaziya kwakhe ukuzwela” kwezifundo azenza kumagundane namagundane ngawo-1980 nango-1990.
Ubufakazi obuqonde ngokwengeziwe benzelwe uLwesine ekuseni buvela ePortier bese kuphekwa imibuzo yakhe. Ngemuva kwalokho, iMonsanto izothola ithuba layo lokwethula ochwepheshe bayo ejajini. Le nkampani ithe izokwethula ofakazi abane.
Ngemuva kobufakazi baleli sonto, abameli bazo zombili izinhlangothi bazothola ithuba labo lokuphikisana ngomlomo nejaji esikhathini esithile emasontweni amabili ezayo. Ijaji lizokhipha isinqumo sokuthi ngabe ofakazi bommangali abanikeza imibono yabo yesayensi maqondana nesizathu bazovunyelwa yini ukufakaza uma kuqulwa icala.
Ukugxila esinqumweni sejaji ukuthi ngabe ochwepheshe basebenzisa indlela eyaziwayo nethembekile ukuze bafinyelele emibonweni yabo. Uma enquma ukuthi obani noma bonke ofakazi abathembele kulesi sisekelo esifanele sesayensi angabakhipha ekufakazeni, isenzo esingaba yigalelo elinamandla ecaleni labamangali nokunqoba kweMonsanto.
Ngiyaxolisa ukusho ukuthi kufanele ngiye eNew York City ngoLwesine, ngakho-ke ngizophuthelwa izinsuku ezimbili zokugcina zobufakazi. Kepha i-USRTK izokwenza ukuthi okubhaliwe kutholakale nokuqoshwa kwevidiyo kokulalelwa okuphelele lapho ukuxhumana kwewebhu sekutholakala ngemuva kokuphela kwemicimbi yaleli sonto.
Kubuyekezwe: 03/09/2018 09:50 by UCarey Gillam
Imibhalo ebhalwe kusukela ngoMashi 7 & 8 ukulalelwa
Bekufanele ngiye kwelinye idolobha kepha nangu umbhalo ovela ekulalelweni kuka-Mashi 7, https://usrtk.org/wp-content/uploads/2018/03/Transcript-hearing-March-7-2018.pdf nanku umbhalo ovela ezenzakalweni zangoLwesine https://usrtk.org/wp-content/uploads/2018/03/Transcript-for-Daubert-Hearing-March-8-2018.pdf
Uzakwethu uStacy Malkan ubheke enkantolo namuhla ukunazisa nonke!
Kubuyekezwe: 03/09/2018 14:43 by UStacy Malkan
Usuku Lokugcina Lobufakazi bukaDaubert
Kungenwa ngo-inning wokugcina weSonto Lezesayensi njengoba ummeli kommangali esezoqala ukubuza ngokuhlwaya isifo sikashukela somdlavuza uDkt Lorelei Mucci, ongusolwazi ophathelene nezifo zezifo e-Harvard TH Chan School of Public Health. Ufakazi wokugcina! Ukuvuselelwa okuningi kusanda kuvela ebufakazini bukaDkt.Mucci kanye nobufakazi bangaphambilini ngufakazi kommangali uDkt Chadi Nabhan, ibhodi eliqinisekisiwe le-oncologist yezokwelapha kanye nomsizi kaprofesa owedlule e-University of Chicago.
Kubuyekezwe: 03/15/2018 10:45 by UStacy Malkan
Iviki Lesayensi Liyaphela Enkantolo Yomfelandawonye
Ukuhlolwa kwesiphambano kukaDkt. Mucci kuqediwe, futhi lokho kungukugoqwa kobufakazi beviki leSayensi le-glyphosate. IJaji uChhabria ufuna kushayelwe ihlombe intatheli yasenkantolo; "Sonke singavuma ukuthi ubenomsebenzi onzima kunabo bonke kuleli kamelo kuleli sonto." Izimpikiswano zomlomo zisethelwe i-Weds ngo-10 ekuseni
Namuhla, kwethulwe ofakazi ababili bokugcina: UDkt Chadi Nabhan wabamangali (akakwazanga ukufika lapha kuze kube namuhla) noDkt Lorelei Mucci wezokuvikela. UDkt Nabhan ungudokotela wesifo somdlavuza osebenza njengomqondisi wezokwelapha weCardinal Health futhi uneminyaka eyi-17 yokwenza komtholampilo nocwaningo lwezifundo olugxile kuma-lymphomas.
UDkt Nabhan uxoxe ngenqubo i-International Agency for Research on Cancer eqhuba ngayo ama-monograph ayo ukuthola ukuthi amakhemikhali ayawudala yini umdlavuza. I-ejensi inebha ephezulu yokubheka ukuthi ibuyekeza ini, uthe - ukuvezwa kumele kube okuphezulu nedatha yezilwane eqinile. Kusukela ngo-1965, i-IARC ibuyekeze ama-ejenti ayi-1003 yathola ama-20% kungama-carcinogens; I-120 ihlukaniswe njenge-carcinogenic futhi i-81 ihlukaniswe njenge-carcinogenic, kufaka phakathi i-glyphosate.
"Ngombono wami, ingozi (ye-NHL) (yokuchayeka kwe-glyphosate) ibaluleke kakhulu emtholampilo ukuze iziguli zikwazi," kusho uDkt, uNabhan. "Umbiko we-IARC uyagculisa kakhulu."
UDkt Nabhan akanawo umbono ophakeme we-Agricultural Health Study (AHS) obekuyisihloko sengxoxo enkulu yanamuhla. "Kunamaphutha amaningi kakhulu kulolu cwaningo okungenzeka ukuthi kutholakale iziphetho," esho. Ukushaye eceleni ukuhlaziywa okubuyekeziwe "ukuhlaziywa okubuyekeziwe kwesifundo esivele sinamaphutha."
Ekugcineni kwaba nguDkt. Lorelei Mucci wezokuvikela iMonsanto. UDkt. Mucci ungusolwazi ophathelene nezifo zezifo eHarvard TH Chan School of Public Health futhi umsizi kaprofesa wezokwelapha eHarvard Medical School. Indawo yakhe enkulu yocwaningo nokufundisa yisifo somdlavuza.
UDkt. Mucci uxoxe ngombono wakhe amandla nemikhawulo yezifundo ezine ze-epidemiological (okulotshiwe lapha nemininingwane) ikakhulukazi isifundo se-AHS. Abaphenyi bokuhlaziywa kweqembu le-AHS babike ukuthi abukho ubufakazi bokuhlangana phakathi kokuchayeka ku-glyphosate nobungozi be-NHL, obubhekelela ukuvezwa kokubili kwesikhathi esifushane nesikhathi eside.
Ubufakazi obuningi bukaDkt.Mucci babugxile emibuzweni yamajaji mayelana nokuba semthethweni kokuzibika ngokwakho emibuzweni egcwele abagcwalisi bezinambuzane mayelana nokuchayeka kwabo kwi-glyphosate. UDkt. Mucci uchaze ukuthi kungani ekholelwa ukuthi ukubikwa kwakuthembekile, futhi uyaqiniseka ngokutholakele kocwaningo ukuthi abukho ubufakazi bokuhlangana okuhle phakathi kokuchayeka nobungozi be-NHL futhi abukho ubufakazi bokuphendula komthamo.
Ekuhlolweni okuphikisayo, uDkt. Mucci ucacise ukuthi umbono wakhe wobungcweti ubususelwa emininingwaneni yezifo i-IARC eyibukile futhi eseyaphuma kusukela, i-AHS ebuyekeziwe nokuhlaziywa okubuyekeziwe kweProject Pooled Project yaseNyakatho Melika. Akazange abheke idatha enobuthi noma idatha yezilwane.
Kubuyekezwe: 03/12/2018 11:58 by UStacy Malkan
Okubhaliwe futhi Yini Okulandelayo?
Ubufakazi buphelele ezinsukwini ezinhlanu zeDaubert Hearings ukubuyekeza ubufakazi besayensi obuxhumanisa i-glyphosate, ikhemikhali elibalulekile kuMonsanto's Roundup weed killer, nohlobo lomdlavuza olutholakala kakhulu kubalimi kunabantu abaningi. Izimpikiswano zokuvala zihlelelwe uLwesithathu Mashi 14 (isikhathi se-TBD). Ijaji laseNkantolo yesiFunda e-US uVince Chhabria uzobe esenquma ukuthi ngabe bukhona yini ubufakazi bokuxhasa isimangalo sabamangali ukuthi ukuvezwa ku-Roundup kungadala i-non-Hodgkin Lymphoma (NHL), futhi uma ochwepheshe abanikezela ngemibono yesayensi mayelana ne-causation bazovunyelwa ukufakaza uma kuqulwa icala.
Le micimbi, ebizwa ngokuthi “iSonto leSayensi” yinkantolo ngoba bonke ubufakazi buqhamuke kochwepheshe besayensi yomdlavuza, ibimaka okokuqala lapho kuhlaziywa khona umzimba wocwaningo oluphathelene ne-glyphosate neNHL. I- iziteki ziphakeme Okwe abalimi nemindeni yabo ukumangalela iMonsanto, kanye nenkampani ethola cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yemali etholakalayo evela kwimikhiqizo esekwe ku-glyphosate.
Ngezansi kukhona okubhalwe kusuka ku-glyphosate Science Week. Eminye imibhalo yasenkantolo neyokutholwa evela emizileni ye-glyphosate, kanye nokubika nokuhlaziywa, kuthunyelwe ku- Ikhasi le-USRTK Monsanto Papers.
Kubuyekezwe: 03/13/2018 12:22 by UStacy Malkan
Amavidiyo weDaubert Ukulalelwa Manje Kuthunyelwe
INkantolo yase-US, Isifunda Esisenyakatho neCalifornia ifake yonke imidwebo yamavidiyo kaMashi 5-9 “Isonto Lezesayensi” iDaubert Hearings enkantolo yemikhawulo ye-Roundup yemikhiqizo ebhekene neMonsanto Company.
Ungathola amavidiyo lapha: http://www.uscourts.gov/cameras-courts/re-roundup-products-liability-litigation
Iwebhusayithi yenkantolo inikeza okuthakazelisayo umlando mayelana amakhamera ezinkantolo, kanye nokuqhubeka Uhlelo lokushayela izindiza ngaphansi kwalapho kwaqoshwa khona ukulalelwa kwe-glyphosate - okuwukuphela kweDaubert Hearings kuze kube manje etholakalayo yokubukwa kuwebhusayithi yenkantolo. Ukunqoba ngokusobala ngokubuka kwethu!
Lokho kusonga ukubikwa kweViki leSayensi, bhalisela iphephandaba le-USRTK ukugcina usesikhathini nophenyo lwethu nokubika.
Uma ulwazisa lolu hlobo lokubika oluzimele, sicela ucabangele ukunikela e-US Right to Know.
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane UBaum Hedlund, Ukulalelwa kukaDaubert, amacala abalimi, glyphosate, Monsanto, RoundUp, Iviki Lesayensi, Ijaji laseMelika uVince Chhabria